Iindaba - Izazinzulu zeBiomedical kufuneka zenze okungakumbi ukuphucula ukufaneleka kunye nokuveliswa kwakhona kophando lwenkcubeko yeeseli
Sisebenzisa iikuki ukuphucula amava akho.Ngokuqhubeka nokukhangela le webhusayithi, uyavumelana nokusebenzisa kwethu iikuki.Iinkcukacha ezithe xaxe.
Kukho imfuneko engxamisekileyo yokuba iingxelo zophando lwebhayoloji yeeseli ezanyisayo zibe zisemgangathweni ngakumbi kwaye zibe neenkcukacha, kunye nokulawula ngcono kunye nokulinganisa iimeko zokusingqongileyo zenkcubeko yeeseli.Oku kuya kwenza imodeli yefiziyoloji yomntu ichaneke ngakumbi kwaye ibe negalelo ekuphindaphindeni kophando.
Iqela lezazinzulu ze-KAUST kunye noogxa baseSaudi Arabia kunye ne-United States bahlalutya amaphepha angama-810 akhethwe ngokungacwangciswanga kwiiseli ze-mammalian.Bangaphantsi kwama-700 kubo ababandakanyekayo kwi-1,749 yovavanyo lwenkcubeko yeseli nganye, kubandakanywa idatha efanelekileyo malunga neemeko zokusingqongileyo zendlela yenkcubeko yeseli.Uhlalutyo lweqela lubonisa ukuba umsebenzi omninzi kufuneka wenziwe ukuphucula ukufaneleka kunye nokuveliswa kwakhona kwezifundo ezinjalo.
Hlakulela iiseli kwi-incubator elawulwayo ngokwemigaqo eqhelekileyo.Kodwa iiseli ziya kukhula kwaye "ziphefumle" ekuhambeni kwexesha, ukutshintshiselana ngegesi kunye nokusingqongileyo.Oku kuya kuchaphazela imeko yendawo apho zikhula khona, kwaye kunokutshintsha iasidi yenkcubeko, ioksijini enyibilikileyo, kunye neparamitha yecarbon dioxide.Olu tshintsho luchaphazela ukusebenza kweeseli kwaye lunokwenza imeko yomzimba yahluke kwimeko esemzimbeni womntu ophilayo.
"Uphando lwethu lugxininisa umlinganiselo apho izazinzulu zingawunaki ukubeka iliso kunye nokulawula indawo yeselula, kunye nomlinganiselo apho iingxelo zibenza bakwazi ukufikelela kwizigqibo zesayensi ngeendlela ezithile," kusho uKlein.
Ngokomzekelo, abaphandi bafumanisa ukuba malunga nesiqingatha samaphepha ohlalutyo awazange achaze ubushushu kunye ne-carbon dioxide setting yenkcubeko yeeseli zabo.Ngaphantsi kwe-10% ibike umxholo we-oxygen emoyeni kwi-incubator, kwaye ngaphantsi kwe-0.01% ibike i-acidity ye-medium.Akukho maphepha achazwe ngeoksijini enyibilikileyo okanye icarbon dioxide kumajelo eendaba.
Simangalisa kakhulu ukuba abaphandi baye bangayinaki kakhulu imiba yokusingqongileyo egcina amanqanaba afanelekileyo e-physiologically ngexesha lenkqubo yonke yenkcubeko yeeseli, ezifana ne-acidity yenkcubeko, nangona iyaziwa ukuba oku kubalulekile ekusebenzeni kweseli.”
Iqela likhokelwa nguCarlos Duarte, i-ecologist yaselwandle e-KAUST, kunye no-Mo Li, i-stem cell biologist, ngokubambisana noJuan Carlos Izpisua Belmonte, i-biologist yophuhliso kwi-Salk Institute.Okwangoku unguprofesa otyelele e-KAUST kwaye ucebisa ukuba izazinzulu ze-biomedical ziphuhlise iingxelo ezisemgangathweni kunye neenkqubo zokulawula kunye nokulinganisa, ngaphezu kokusebenzisa izixhobo ezikhethekileyo zokulawula indawo yenkcubeko yeeseli ezahlukeneyo.Iijenali zenzululwazi kufuneka ziseke imigangatho yokunika ingxelo kwaye zifuna ukubekwa iliso okwaneleyo kunye nolawulo lwe-asidi yemidiya, ioksijini enyibilikileyo kunye nekhabhon diokside.
"Ukunika ingxelo engcono, ukulinganisa, kunye nokulawula iimeko zokusingqongileyo zenkcubeko yeeseli kufuneka ziphucule amandla enzululwazi ukuphinda kunye nokuvelisa iziphumo zovavanyo," kusho u-Alalslami."Ujoliso olusondeleyo lunokuqhuba izinto ezintsha ezifunyenweyo kunye nokwandisa ukubaluleka kophando lwangaphambili kumzimba womntu."
Isazinzulu saselwandle uShannon Klein siyacacisa: “Inkcubeko yeeseli ezincancisayo sisiseko sokwenziwa kwezitofu zokugonya intsholongwane kunye nobunye ubugcisa bebhayoloji."Phambi kovavanyo kwizilwanyana nakubantu, zisetyenziselwa ukufunda ibhayoloji yeeseli ezisisiseko, ukuphindaphinda iindlela zesifo, kunye nokufunda ubutyhefu bamachiza amatsha."
Klein, SG, njl. (2021) Ukungahoywa ngokubanzi kolawulo lwendalo esingqongileyo kwinkcubeko yeeseli ezanyisayo kufuna iindlela ezingcono.Ubunjineli beNdalo yeBiomedical.doi.org/10.1038/s41551-021-00775-0.
iithegi: B iseli, iseli, inkcubeko yeseli, incubator, iseli mammalian, ukuvelisa, ioksijini, pH, physiology, preclinical, uphando, T cell
Kolu dliwano-ndlebe, uNjingalwazi uJohn Rossen wathetha ngolandelelwano lwesizukulwana esilandelayo kunye nefuthe laso ekuxilongeni isifo.
Kolu dliwano-ndlebe, i-News-Medical ithethe noNjingalwazi uDana Crawford malunga nomsebenzi wakhe wophando ngexesha lobhubhani we-COVID-19.
Kulo dliwano-ndlebe, i-News-Medical yathetha noDkt. Neeraj Narula malunga nokutya okucutshungulwayo kunye nokuba oku kunokunyusa njani umngcipheko wesifo sofuba (IBD).
I-News-Medical.Net ibonelela ngenkonzo yolwazi lwezonyango ngokuhambelana nale migaqo nemiqathango.Nceda uqaphele ukuba ulwazi lwezonyango kule webhusayithi yenzelwe ukuxhasa endaweni yobudlelwane phakathi kwezigulane kunye noogqirha / oogqirha kunye neengcebiso zonyango abanokubonelela.
I-Dl-Pyroglutamic Acid, I-L-Glutamine Powder, IAcetyl-L-Leucine, 537-55-3, L-Leucine, Pharmaceutical Chemical,